Entertainments | Canadian Reporters
Posted on October 22, 2019 , updated on February 14, 2020 by क्यानेडियन रिपोटर्स
नारायण घिमिरे, टोरन्टो साँझपख काम विशेषले डाँडाको टुप्पो पर्ने गाउँ बाहुन भन्ज्याङ जानैपर्ने भयो । टर्च लाइटमा ब्याट्री कम थियो । जंगलमा चाहिन्छ भनेर जेनतेन छामछाम छुमछुम गर्दै कल्चोकको ठाडो बाटो चढ्दै थिएँ । बाटोमै भेटिए सीमा र सुनीता । अँध्यारोमा असिनपसिन हुँदै उक्लिरहेका । मैले झोलाबाट लाइट निकालें । उनीहरूलाई मेरी मितिनी आमाको घरसँगै […]
Posted on March 25, 2019 , updated on February 14, 2020 by क्यानेडियन रिपोटर्स
सुर्यको सेतो प्रकाश हामीले देखिने ७ रंगहरु मिलेर बनेको हुन्छ। बिरुवाको पातमा रहने क्लोरोफिलको मलिकुलले सातरंग मध्धे निलो र रातो लाईट सोसी ईनर्जीका लागि चाहिने खाना बनाउने गर्छ। तेस्तै कतिपय बिरुवा को फलमा हुने केरेटिनोईड पिगमेन्ट (जस्तै गोलभेडाको लाईकोपिन, मकैको जियोजेन्थिन, सुन्तलाको फलको बोक्राको बिटा केरोटिन आदि) ले सुर्यको किरणबाट भोइलेट (बैजेनी) र निलो-हरियो लाईट […]
१) राज्यको नितिहरू प्राय २ तरिका बाट बन्छ। एक संबिधान सभा याने जनता बाट। दोस्रो बाधा अडचन फुकाऊने नाममा कर्मचारि तन्त्रबाट सँबिधानलाई अाफू अनुकुल ब्याख्या गरेर। अाफू अनुकुल बनाईएका नितिहरू बिभेदकारि हुन्छ भनि जनताका प्रतिनिधि बाट नियमहरू बनाऊनु ऊत्तम बिकल्प मानिन्छ । तर जब जनप्रतिनिधिबाट सँबिधान बनाऊनुपर्ने चुरो कारणमा चुकिन्छ मुलुक रणभुमि बन्छ। २) चुनाब […]
Posted on August 9, 2018 , updated on February 15, 2020 by क्यानेडियन रिपोटर्स
नेपालमा रैथाने बनस्पतिहरुलाई हाम्रा उत्पादित कृषि उपज भण्डारणमा सूरछाका लागि परम्परागत रुपमा प्रयोग गरिथ्यो! उदारणका लागि फुलेको पातीबाट बनेको पाउडरलाई पोकामा बेरी धान गेडागुडी अन्नमा राखेर वा घरेलु डिस्टिलेसनगरि प्राप्त एसेंसियल ओएल भण्डारण बाहिर छर्केर अन्न र गेडागुडीमा किराहरुको रिपेलेंटको रुपमा उपयोग गरिन्थ्यो ! खपटे, घुन र पुत्लाका विरुद्ध बोजोको धुलो प्रयोग हुन्थ्यो ! […]
Posted on May 16, 2018 , updated on February 15, 2020 by क्यानेडियन रिपोटर्स
नारायण घिमिरे नेपालमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’को चर्चा हुन थालेको लामो समय व्यतीत भइसक्यो । खासगरी राजा महेन्द्रकै पालादेखि नै ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘रिभर्स ब्रेन ड्रेन’का नाममा विदेश पढेका आफ्ना अनुचरहरूलाई महत्वपूर्ण ओहोदा दिँदै जबर्जस्ती ‘थिंक ट्यांक’ बनाइएकै हो । राजा संवैधानिक भएपछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएन । विदेशमा आफ्नो विषयमा उल्लेखनीय काम […]
Posted on March 29, 2018 , updated on May 21, 2018 by क्यानेडियन रिपोटर्स